Saaka Magaalada Jigjiga iyo xaalkeega: – Xeernews24
Saaka Magaalada Jigjiga iyo xaalkeega:
1. Xaaladdu way degantahay tan iyo xalay walow ay tahay xasilooni nugul oon luga adag ku joogin.
2. Khadka internet-ka ayaa wali go’an. Sidoo kale khadka telefoonada ayaa mararka qaar cidhiidhi noqonaya.
3. Ethiopian Airlines ayaa hakisay duullimaadyadii maalinlaha ahaa ee ay Jigjiga ku tegi jirtay.
4. Meelihii shalay aadka loo baabi’iyay waxaa ka mid ahaa goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad ka soo jeedabeesha Jaarso . Meheradahaas la weeraray waxaa ka mid ah City Crown Hotel oo horayba u xidhnaa, dukaanka elektaroonikada ee Mubaarak iyo warshadda furaashyada Jigjiga oo ganacsade Jaarso ahi saami ku layaahaayeen.
5. Cabdi Iley ayaa loo badinayaa inuu wali ku jiro xarunta madaxtooyada. Waxaa la sheegayaa inuu xalay u hoyday dhufays ka dhisan madaxtooyada dhexdeeda, qaybteeda waddada Wajaale u jeedda. Waxa ku hareeraysan Liyuu xigtadiisa u badan oo aad u hubaysan. Lama yaqaan waaxa u qorshaysan ee samayn doono.
6. Waxaa laga warqabaa in Liyuugu ay talooyin dhinaca istaraatijiyadda ciidanka ah iyo guubaabinba ka helayaan janano Tigree ah oo dhawaan xilkooga waayay oo ay ugu magac waynyihiin General Abraha Woldemariam iyo General Gebre.
7. Dawladda dhexe ayaa aad uga baaraandegaysa sidda ugu sahlan ee Cabdi loo wajihi karo. Waxaa la sheegayaa in la sameeyay iskudayo wadahadal balse ay fashilmeen. Waxa la filayaa in lasoo kordhiyo tirada ciidanka militariga ah ee Jigjiga ku sugan. Waxa kaloo suuragal ah in la hawlgaliyo cutubyo ka tirsan waaxda la-dagaallanka argagaxisada. Waxaa iyana la saadaalinayaa in deegaanka lagu soo rogi doono xaalad degdeg ah (State of Emergency) si ciidanka militariga loo siiyo awoodo dheeraad ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-05 09:48:222018-08-05 09:48:22Saaka Magaalada Jigjiga iyo xaalkeega:
Maxaa ku qoran qodobka 39 ee dastuurka Ethiopia ee uu maamulka Soomaalidu adeegsan... Addis Standard ayaa qortay in xabsiga la dhigtay masuuliyiin ka tirsan dowlad...